Ninth Meeting of Joint Commission for Bilateral Cooperation between Myanmar, Thailand held – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
During the Meeting, the two Ministers touched onawide range of issues relating to promoting bilateral relations, economic and socio-cultural cooperation; enhancing the bilateral relations between Myanmar and Thailand to the “Strategic Partnership”; doubling the current bilateral trade volume by 2022; working continuously for the promotion and protection of the rights of Myanmar migrant workers; opening of the 2nd Myanmar-Thailand Friendship Bridge for better connectivity; strengthening the exchanges between the Provinces/States and Regions along the border; implementing of modern villages project to contribute to the efforts of the Myanmar Government for the development of Rakhine State; promoting people-to-people contacts and tourism; and exploring possible ways to further expand the multi-faceted cooperation in both bilateral and regional contexts.
Following the meeting, U Thant Sin Maung, Union Minister for Transport and Communications of the Republic of the Union of Myanmar, and H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, signed Air Services Agreement between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Government of the Kingdom of Thailand. Likewise, U Khin Maung Maw, Director-General of the Department of Fisheries, Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, and H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak, Director-General of Thailand International Cooperation Agency, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, signed the Memorandum of Understanding on the Project on the Development of Shrimp Culture in Rakhine State between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Government of the Kingdom of Thailand.
မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင်၏ (၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကျင်းပ
မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင်၏ (၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ (၀၉၃၀) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဧရာဝတီခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဒွန်ပရာမွတ် ဝီနိုင်းတို့မှ ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် လူမှု-ယဉ်ကျေးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးအား မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက် ဆက်ဆံရေးအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုကို (၅)နှစ်အတွင်း နှစ်ဆတိုးမြှင့်ရေး၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားများ အခွင့်အလမ်း ကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆက်လက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပေါင်းစည်းဆက်နွှယ်မှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် ဒုတိယမြောက် ချစ်ကြည်ရေးတံတား ဆောလျင်စွာ ဖွင့်လှစ်ရေး၊ နယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်ရှိ ပြည်နယ်များအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု မြှင့်တင်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းနေမှုများကို အထောက်အကူပြုစေရေး အတွက် စံပြကျေးရွာများ တည်ဆောက်ရေး၊ ပြည်သူအချင်းချင်းအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု မြှင့်တင်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စများ အပါအဝင် ဘက်စုံကဏ္ဍစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို နှစ်နိုင်ငံအကြားတွင်သာမက ဒေသတွင်းနယ်ပယ်၌ပါ ပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားရေးအတွက် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေရန် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ထိုင်းအစိုးရတို့အကြား လေကြောင်း သဘော တူညီချက်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဒွန်ပရာမွတ် ဝီနိုင်းတို့မှ လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ထိုင်းအစိုးရတို့အကြား ရခိုင်ပြည်နယ် ရေငန်ပုစွန် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်မောင်မော်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ထိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မစ္စ ဆူဖတ်ထရာ ဆရီမိုင်း သရီဖိထက်တို့မှ လည်းကောင်း အသီးသီး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဒွန်ပရာမွတ် ဝီနိုင်းတို့သည် (၉) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ခြင်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပူးတွဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အပြီးတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်မှ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဒွန်ပရာမွတ် ဝီနိုင်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယင်းနေ့ (၁၂၃၀) နာရီအချိန်တွင် အမ်ဂယ်လာရီ (ဆိုဖီတယ်လ်) ဟိုတယ်၌ နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။